What is HTC Doing Now? • TECH CORNER
What is HTC Doing Now?
တစ်ချိန်က Smartphone လောကမှာ သရဖူဆောင်းခဲ့တဲ့ HTC ရဲ့ အနာဂတ် Plan တွေအကြောင်း
HTC Exodus 1 ( Photo from HTC exodus )
#unicode ယခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေကြတဲ့ Android OS ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Smartphone ကို HTC က HTC Dream ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ 2008 ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေရဲ့ စတင်ထုတ်လုပ်သူ ဖခင်ကြီးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ HTC အနေနဲ့ Google ရဲ့ Pixel2တွေကိုလဲ Hardware တွေ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ 2013 ဝန်းကျင်တုန်းက HTC One ဆိုတာ ကိုယ်တွေ အရမ်းကို လိုချင်ခဲ့ရတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တစ်ချိန်တုန်းက Smartphone လောကမှာ ဘုရင်တစ်ပါးလို သရဖူဆောင်းခဲ့တဲ့ HTC အခုအချိန်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ?
HTC CEO Yves Maitres ( Photo from techcrunch )
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က HTC ရဲ့ CEO Wang ဟာ ရာထူးမှ အနားယူသွားခဲ့ပြီး CEO အသစ် ရဲ့ နေရာကို Yves Maitres ဆိုသူက လွဲပြောင်းဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Tech Crunch ရဲ့ week event ကို CEO အသစ်အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Yves Maitres ကို Tech Crunch က HTC ရဲ့ အနာဂတ် Smartphones တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Plan တွေကို မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ HTC One ( Photo from HTC )
HTC ဟာ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အတော့်ကို ရုန်းကန်နေခဲ့ရပြီး အရှူံးတွေ ပေါ်နေတာကြောင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဝက်ကျော်ကိုလဲ အလုပ်မှ ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေနဲ့ အသားကျအောင် ကြိုးစားနေဆဲပါ။
CEO အသစ်အနေနဲ့ သူတို့ဟာ ‘ Smartphone လောကရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှူတွေကနေ လုံးဝ အနားယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ‘ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ HTC vive လို ထုတ်ကုန်မျိုးတွေနဲ့ Virtual Reality နည်းပညာပိုင်းမှာပဲ ဆက်လက်အားစိုက်သွားမှာကြောင့် လို့သိရပါတယ်။ Smartphone နယ်ပယ်မှာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ HTC ဟာ Virtual reality နည်းပညာပိုင်းမှာတော့ HTC vive လို VR headset တွေနဲ့ အတော်လေး အောင်မြင်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
HTC Vive Pro ( Photo from VIVE )
CEO Maitress အနေနဲ့ သူတို့ဟာ wrong time မှာ မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရတာဟာ မှားယွင်းမှူတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချိန်ကောင်းမှာ မှားယွင်းမှူကို လုပ်နေတာဟာ သူတို့အတွက်တော့ မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်တဲ့။ ဆိုလိုတာကတော့ smartphone တွေအရမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ အချိန်ကောင်းမှာ Smartphone လောကထဲပြန်ဝင်သင့်တာမျိုးကို မလုပ်ပဲ လူတွေသိပ်စိတ်ဝင်စားမှူမရှိတဲ့ Virtual reality လို နည်းပညာမျိုးမှာ အားစိုက်နေတာဟာ HTC အတွက်တော့ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ လက်ခံထားပုံရပါတယ်။
HTC U12+ ( Photo from HTC )
သင်ဟာ HTC ရဲ့ အမာခံ Fan တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ အခုချိန်မှာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ HTC ရဲ့ Flagship Smartphones တွေကတော့ HTC Exodus နဲ့ HTC U12+ ဖြစ်ပါတယ်။ HTC Exodus ကို Snapdragon 845 Processors နဲ့ မနှစ်က ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Cryptocurrency အတွက် Hardware ပိုက်ဆံအိတ်ပုံစံမျိုးအသုံးပြုစေဖို့ ထုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ မနှစ်ကတုန်းကတော့ Powerful ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး Design ပိုင်းမှာလဲ အနောက်က Transparent Design နဲ့ Unique ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စျေးနှူန်းပိုင်း ကြီးမြင့်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှူ မရရှိခဲ့ပါဘူး။
U12+ ကတော့ ပိုပြီး Class ဆန်တဲ့ HTC ရဲ့ Flagship Smartphone ပါပဲ။ သူလဲမနှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ အခုနှစ် 2019 အတွက် HTC ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Phone ကတော့ 2019 August မှာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Midrange အမျိုးအစား HTC Wildfire X ပဲဖြစ်ပါတယ်။
HTC WIldfire X ( Photo from HTC India )
လက်ရှိ CEO ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ပြောကြားချက်ကြောင့် အနာဂတ်မှာ HTC ရဲ့ Smartphone တွေကို ဆက်လက်မြင်တွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ချိန်က ပထမဆုံး android smartphone ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Brand တစ်ခုအနေနဲ့ အခုလို နှူတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာကတော့ အတော်လေး ဝမ်းနည်းစရာပါ။
သင်ကရော တစ်ချိန်က HTC ရဲ့ ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလား?
HTC ရဲ့ ဘယ်ဖုန်းတွေကို သုံးခဲ့ဖူးလဲ?
Photo From HTC and TechCrunch
#zawgyi ယခုလက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးေနၾကတဲ့ Android OS ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Smartphone ကို HTC က HTC Dream ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ 2008 ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Android ဖုန္းေတြရဲ့ စတင္ထုတ္လုပ္သူ ဖခင္ႀကီးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ HTC အေနနဲ႔ Google ရဲ့ Pixel2ေတြကိုလဲ Hardware ေတြ ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ 2013 ဝန္းက်င္တုန္းက HTC One ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ အရမ္းကို လိုခ်င္ခဲ့ရတဲ့ ဖုန္းတစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး တစ္ခ်ိန္တုန္းက Smartphone ေလာကမွာ ဘုရင္တစ္ပါးလို သရဖူေဆာင္းခဲ့တဲ့ HTC အခုခ်ိန္မွာ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ?
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္က HTC ရဲ့ CEO Wang ဟာ ရာထူးမွ အနားယူသြားခဲ့ၿပီး CEO အသစ္ ရဲ့ ေနရာကို Yves Maitres ဆိုသူက လြဲေျပာင္းဆက္ခံခဲ့ပါတယ္။ Tech Crunch ရဲ့ week event ကို CEO အသစ္အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Yves Maitres ကို Tech Crunch က HTC ရဲ့ အနာဂတ္ Smartphones ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Plan ေတြကို ေမးျမန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
HTC ဟာ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ အေတာ့္ကို ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရၿပီး အရႉံးေတြ ေပၚေနတာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ကိုလဲ အလုပ္မွ ထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ အသားက်ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဆဲပါ။
CEO အသစ္အေနနဲ႔ သူတို႔ဟာ ‘ Smartphone ေလာကရဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္မႉေတြကေန လုံးဝ အနားယူသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ‘ အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ HTC vive လို ထုတ္ကုန္မ်ိဳးေတြနဲ႔ Virtual Reality နည္းပညာပိုင္းမွာပဲ ဆက္လက္အားစိုက္သြားမွာေၾကာင့္ လို႔သိရပါတယ္။ Smartphone နယ္ပယ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ HTC ဟာ Virtual reality နည္းပညာပိုင္းမွာေတာ့ HTC vive လို VR headset ေတြနဲ႔ အေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
CEO Maitress အေနနဲ႔ သူတို႔ဟာ wrong time မွာ မွန္ကန္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ရတာဟာ မွားယြင္းမႉတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေကာင္းမွာ မွားယြင္းမႉကို လုပ္ေနတာဟာ သူတို႔အတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္တဲ့။ ဆိုလိုတာကေတာ့ smartphone ေတြအရမ္းေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေကာင္းမွာ Smartphone ေလာကထဲျပန္ဝင္သင့္တာမ်ိဳးကို မလုပ္ပဲ လူေတြသိပ္စိတ္ဝင္စားမႉမရွိတဲ့ Virtual reality လို နည္းပညာမ်ိဳးမွာ အားစိုက္ေနတာဟာ HTC အတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ လက္ခံထားပုံရပါတယ္။
သင္ဟာ HTC ရဲ့ အမာခံ Fan တစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ဝယ္ယူနိုင္တဲ့ HTC ရဲ့ Flagship Smartphones ေတြကေတာ့ HTC Exodus နဲ႔ HTC U12+ ျဖစ္ပါတယ္။ HTC Exodus ကို Snapdragon 845 Processors နဲ႔ မႏွစ္က ေၾကျငာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Cryptocurrency အတြက္ Hardware ပိုက္ဆံအိတ္ပုံစံမ်ိဳးအသုံးျပဳေစဖို႔ ထုပ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ မႏွစ္ကတုန္းကေတာ့ Powerful ဖုန္းတစ္လုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး Design ပိုင္းမွာလဲ အေနာက္က Transparent Design နဲ႔ Unique ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းႏႉန္းပိုင္း ႀကီးျမင့္ၿပီး လူေတြရဲ့ စိတ္ဝင္စားမႉ မရရွိခဲ့ပါဘူး။
U12+ ကေတာ့ ပိုၿပီး Class ဆန္တဲ့ HTC ရဲ့ Flagship Smartphone ပါပဲ။ သူလဲမႏွစ္က မိတ္ဆက္ခဲ့တာပါ။ အခုႏွစ္ 2019 အတြက္ HTC ရဲ့ ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားတဲ့ Phone ကေတာ့ 2019 August မွာ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Midrange အမ်ိဳးအစား HTC Wildfire X ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ CEO ရဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ HTC ရဲ့ Smartphone ေတြကို ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္က ပထမဆုံး android smartphone ကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Brand တစ္ခုအေနနဲ႔ အခုလို ႏႉတ္ဆက္သြားခဲ့ၿပီဆိုတာကေတာ့ အေတာ္ေလး ဝမ္းနည္းစရာပါ။
သင္ကေရာ တစ္ခ်ိန္က HTC ရဲ့ ပရိတ္သတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလား?
HTC ရဲ့ ဘယ္ဖုန္းေတြကို သုံးခဲ့ဖူးလဲ?
3 thoughts on “What is HTC Doing Now?”
Pingback: Sony may close it's SmartPhone Business • TECH CORNER
Pingback: HTC ဘာကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတာလဲ? • TECH CORNER
Pingback: Premium 5G Flagship ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်တော့မဲ့ HTC • TECH CORNER